Amboo sa’aa 6:30 irratti naannoo faarsii jedhamutti Bus TATA jedhamu kan Laqamitee irra gara Finfinne nama 60 fe’ee deemaa ture keessatti durbeen Laqamtee tokko adda ishii irra miidhaan guddaan irra ga’ee jira.konkoolaataa sana irras miidhaa guddaan ga’ee jira.Dhagaa dhaan rukutamte. Hospital Amboo ti yaalamaa jirti. Maaloo warreen achii jirtan gargaraa.Hubachiisa:-Qeerroo Amboo irra .Ammas transport kamuu […]
Qeerroo Amboo Gootonnii fi abdii uummata Oromoo qeerron #Amboo osoo humni waraanaa magaalaa guutee dhaabbatuu sodaa tokkoon maletti tiransport kaabinee 7, Minibaasii fi konkolaattota hedduu irratti tarkaanfii fudhataniiru. Yeroo ammaa guutummaa magaalattii keessatti qeerron gurmuun socho’aa jirti. Konkolaattota hunda waamicha qeerroo dhagahuu didan daaressaa jiru. Adaraa ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa akka saree manatti deebinee taa’uu […]